Wms2Cad - la falgal wms adeegyada barnaamijyada CAD - Geofumadas
Wms2Cad - isdhexgalka adeegyada wms ee barnaamijyada CAD
Sebtember, 2018 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Wms2Cad waa aalad gaar ah oo lagu keeno adeegyada WMS iyo TMS sawirka CAD si loo tixraaco. Tan waxaa ka mid ah khariidadaha Google Earth iyo khariidadaha OpenStreet iyo adeegyada muuqaalka.
Waa sahlan, dhaqso iyo wax ku ool. Kaliya dooro nooca khariidada ee liiska hore ee adeegyada WMS ama qeexo mid ka mid ah danahaaga, riix meesha aad rabto inaad soo dejiso khariidada oo aad samayso.
Barnaamijka waxaa ku jira liisto adeegyo WMS ah oo horey loo cayimay. Liiska khariidadaha la heli karo ayaa si sahlan loo ballaarin karaa iyada oo la soo dajinayo dariiqyada adeegga ee danta noo ah. Sidoo kale waxaad gacanta ku hayn kartaa xiriirka adeegga khariidada.
Wms2Cad waxay u oggolaanaysaa barnaamijyada CAD-du-caansan ee ugu caansan, labadaba gabow iyo kuwo cusub, si ay u soo dejiyaan khariidadaha internetka.
AutoCAD: laga bilaabo 2000 ilaa 2018, 32 iyo 64,
AutoCAD LT: kaliya oo leh LT Extender ama CadstaMax,
IntelliCAD: dhammaan noocyada suurtogalka ah ee rikoodhka xogta raajada, oo ay ku jiraan barnaamijka progeCAD, GstarCAD, ZwCAD, BricsCad, ActCAD iyo wax ka badan,
ARES Taliyaha - 2018 ama cusub.
Software wuxuu ka shaqeeyaa qaababka ugu badan Windows ee PC, laga bilaabo Windows XP ilaa Windows 10, oo ay ku jiraan noocyada 64.
Waxa ugu fiicani waa inaad soo dejiso oo aad tijaabiso barnaamijka CAD ee aan isticmaalno.
Soo qaado Wms2Cad oo isku day.
Nidaamka demo wuxuu si buuxda u shaqeeyaa maalmaha 30. Hannaanka demo, waxaad ka soo qaadan kartaa xayndaabka 1000.
Iibsiga qiimaha liisanka oo kaliya 74 dollars. Soo iibso Wms2Cad.
Post Previous" Hore Koorsooyinka ugu fiican ee ArcGIS
Post Next Meeqa dhulku waa ka qiimo badan yahay magaaladaada?Next »